Hot or Cold in Injuries - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Hot or Cold in Injuries
“အအေး လား ? အပူ လား ?”
“သငျဟာ တဈခုခုနဲ့ ထိခိုကျမိလို့ ဒဏျရာ ရလာရငျ သကျသာအောငျ ရခေဲအိတျ အုပျမှာလား (သို့) ရနှေေးအိတျ ကပျမှာလား”
ဒါဆိုရငျတော့ ဒီလို အကွံပွုပါရစေ ☺
“ရခေဲအိတျ(အအေး)ကို သုံးသငျ့(သို့) မသုံးသငျ့သော ထိခိုကျဒဏျရာမြား”
– အသားစမြား ထိခိုကျခွငျး၊ ပွတျရှခွငျး(ဥပမာ – ဓားရှခွငျး)တို့မှာ ဒဏျရာကို အယောငျသကျသာစရေနျ ရခေဲအုပျနိုငျပါတယျ
– အဆဈယောငျခွငျး၊ကွှကျသားမြားဖူးယောငျခွငျး၊အပူလောငျခွငျး အစရှိတာတှမှောလညျး ရခေဲအုပျပေးနိုငျပါသညျ
– အကယျ၍ သငျဟာ ခမျြးတုနျဖြားနပေါက(သို့) အအေးမိဖြားနလြှေငျ အနှေးဓာတျရရှိစရေနျ ရခေဲအိတျမအုပျသငျ့ပါ ..
– ရခေဲအုပျရာတှငျ တဈခါလြှငျ မိနဈ ၂၀ ခနျ့ အုပျနိုငျပွီး တနလြေှ့ငျ အကွိမျမြားစှာ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။တဈခါ အသုံးပွုပီးပါက မိနဈ ၂၀ ခနျ့ ခွား၍ နောကျတဈကွိမျအသုံးပွုသငျ့ပါသညျ။
“ရနှေေးအိတျ(အပူ)ကို သုံးသငျ့(သို့) မသုံးသငျ့သော ထိခိုကျဒဏျရာမြား”
-အာရုံကွောနဲ့ ကွှကျသားမြားကို ပြော့ပွောငျးစရေနျ အပူကိုအသုံးပွုနိုငျပါသညျ
– ကွှကျသားမြားတောငျ့တငျးခွငျး၊အကွောဆှဲခွငျး အစရှိတာတှမှောဒဏျရာရသောနရောပျေါတှငျ အပူကို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ
– သငျ့၏ ခန်ဓာကိုယျပူခြိနျကို လြော့ခခြငျြပါက(သို့) ခြှေးထှကျနပေါက အပူကို အသုံးမပွုသငျ့ပါ
– အပူကိုလဲ သငျခံစားရသော ဒဏျရာ မပြောကျသေးပါက မကွာခဏ အသုံးပွုခွငျးအားဖွငျ့ ဝဒေနာ သကျသာစနေိုငျပါသညျ ။
“အ​အေး လား ? အပူ လား ?”
“သင်​ဟာ တစ်​ခုခုနဲ့ ထိခိုက်​မိလို့ ​ဒဏ်​ရာ ရလာရင်​ သက်​သာ​အောင်​ ​ရေခဲအိတ်​ အုပ်​မှာလား (သို့) ​ရေ​နွေးအိတ်​ ကပ်​မှာလား”
ဒါဆိုရင်​​တော့ ဒီလို အကြံပြုပါရ​စေ ☺
“​ရေခဲအိတ်​(အ​အေး)ကို သုံးသင့်​​(သို့) မသုံးသင့်​သော ထိခိုက်​ဒဏ်​ရာများ”
– အသားစ​များ ထိခိုက်​ခြင်း၊ ပြတ်​ရှခြင်း(ဥပမာ – ဓားရှခြင်း)တို့မှာ ဒဏ်​ရာကို အ​ယောင်​သက်​သာ​စေရန်​ ​ရေခဲအုပ်​နိုင်​ပါတယ်​
– အဆစ်​​ယောင်​ခြင်း၊ကြွက်​သားများဖူး​ယောင်​ခြင်း၊အပူ​လောင်​ခြင်း အစရှိတာ​တွေမှာလည်း ​ရေခဲအုပ်​​ပေးနိုင်​ပါသည်​
– အကယ်​၍ သင်​ဟာ ချမ်းတုန်​ဖျား​​နေပါက(သို့) အ​အေးမိဖျား​နေလျှင်​ အ​နွေးဓာတ်​ရရှိ​စေရန်​ ​ရေခဲအိတ်​မအုပ်​သင့်​ပါ ..
– ​ရေခဲအုပ်​ရာတွင်​ တစ်​ခါလျှင်​ မိနစ်​ ၂၀ ခန့်​ အုပ်​နိုင်​ပြီး တ​နေ့လျှင်​ အကြိမ်​များစွာ အသုံးပြုနိုင်​ပါသည်​။တစ်​ခါ အသုံးပြုပီးပါက မိနစ်​ ၂၀ ခန့်​ ခြား၍ ​​​နောက်​တစ်​ကြိမ်​အသုံးပြုသင့်​ပါသည်​။
“​ရေ​နွေးအိတ်​(အပူ)ကို သုံးသင့်​​(သို့) မသုံးသင့်​သော ထိခိုက်​ဒဏ်​ရာများ”
-အာရုံ​ကြောနဲ့ ကြွက်​သားများကို ​ပျော့​ပြောင်း​စေရန်​ အပူကိုအသုံးပြုနိုင်​ပါသည်​
– ကြွက်​သားများ​တောင့်​တင်းခြင်း၊အ​ကြောဆွဲခြင်း အစရှိတာ​တွေမှာဒဏ်​ရာရ​သော​နေရာ​ပေါ်တွင်​ အပူကို အသုံးပြုနိုင်​ပါသည်​
– သင့်​၏ ခန္ဓာကိုယ်​ပူချိန်​ကို ​လျော့ချချ​င်​ပါက(သို့) ​ချွေးထွက်​​နေပါက အပူကို အသုံးမပြုသင့်​ပါ
– အပူကိုလဲ သင်​ခံစားရ​သော ဒဏ်​ရာ မ​ပျောက်​​သေးပါက မကြာခဏ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်​ ​ဝေဒနာ သက်​သာ​စေနိုင်​ပါသည်​ ။
ရာသီသှေးက ပွောနတေဲ့ သငျ့ကနျြးမာရေး
Pregnant mom and long journey by car